Luis Enrique: ‘Haddii Ay Barcelona Koobka Ku Guulaysato Waa Fantastik, Haddii Kale Kooxda Championska Ah Ayaanu U Hambalyayn Doonaa’ - Laacib.net
Luis Enrique: ‘Haddii Ay Barcelona Koobka Ku Guulaysato Waa Fantastik, Haddii Kale Kooxda Championska Ah Ayaanu U Hambalyayn Doonaa’
by Mohamoud Batalaale | Saturday, May 20, 2017
Tababaraha kooxda Barcelona ee Luis Enrique ayaa sheegay in haddii ay kooxdiisu ku guulaysto koobka La Ligaha in ay noqon doonto wax fantastik ah balse haddii kale ay u hambalyayn doonaa Real Madrid. Barcelona ayaa marka hore u baahan in ay guulaysato kulankeeda Eibar ee Camp Nou ka dhici doona waxayna sidoo kale rajo ka qabtaa in Malaga ay guulaysato kulanka Real Mardrid.
Laakiin Real Madrid oo aan muddo shan sano ah soo arkin urta koobka La Ligaha ayaan doonayn in ay samayso wax qalad ah wuxuuna Zidane soo diyaariyay kooxdii uu ku qaadi lahaa koobkiisii ugu horeeyay ee La Ligaha isaga oo ah macalinka Los Merengues.
Luis Enrique oo ka hadlaya maalinta la Ligaha ugu danbaysa ayaa yidhi: “Diirada saarista shaqada ayaa ah sida kaliya ee xaaladan lagula tacaali karo. Haddii aanu horyaalka ku guulaysano waxay noqon doontaa fanstasti isla markaana waanu u dabaal degi doonaa isaga”.
Haddii kale waxa dhici doona ayuu Enrique sheegay wuxuuna yidhi: ” Haddii kale waxaanu u hambalyayn doonaa kooxda Championska ah sababtoo ah taasi ayaa ah sida gaar ah ee ay xirfadlanimadaydu tahay.” Enrique oo ka sii hadalaya kulanka Eibar ayaa yidhi: ” Waxay ku raaxaysanayaan xili ciyaareeedkoodii ugu fiicnaa waxaanu filaynaa in ay si fiican u ciyaari doonaan laakiin ujeedadayadu dabcan waa in aanu guulaysano”.
Ugu danbayn Enrique ayaa sheegay in ayna macasalaamayn ahayn kulankii Barcelona ugu danbeeyaa balse uu yahay mid uu dhawaan soo laaban doono wuxuuna yidhi: ” Kani ma aha macasalaamayn, waxa uu la mid yahay is arag dhaw, waxaan isku diyaarinayaa kulan muhiim ah oo koobka ah, guulaysiga kulanka ayaana gacmahayaga ku jira”.
Luis Enrique ayaa waqti layaableh ku soo qaatay Camp Nou isaga oo labadiisii xili ciyaareed ee ugu horeeyay Barcelona kula soo guulaystay laba koob oo La Ligaha ah, laba koob oo Copa Del Rey ah, Club World Cupka, Spanish Super Cupka, UEFA Super Cupka si la mid ah koobka Champions Leaque-ga halka ay dhawaan ciyaari doonaan finalka Copa Del Rey oo ay balansan yihiin Alaves.
Paul Scholes Oo Ka Sheekeeyay Qaabkii Mousa Dembélé & Gareth Bale Ay Ugu Qasbeen In Uu Ciyaaraha Kubbada Cagta Gabi Ahaanba Ka Fadhiistay.
Halyayga kooxda Manchester United iyo xulka qaranka England ee Paul Scholes ayaa ka hadlay go’aankii uu kaga soo laabtay kadib markii uu ku dhawaaqay inuu ka fariistay kubada...